I-Digital Remedy's Flip Yenza Ukuthenga, Ukuphatha, Ukuthuthukisa, Nokulinganisa Ukukhangisa Okulula Kakhulu (OTT) | Martech Zone
Ukuqhuma kokukhethwa kukho kwemidiya yokusakaza, okuqukethwe, nokubukwa ngonyaka odlule kwenziwe Ngaphezulu (Ott) ukukhangisa akunakwenzeka ukuziba imikhiqizo nama-ejensi abamele.
I-OTT isho ukusakazwa kwezinsizakalo zemidiya ezinikezela ngokuqukethwe kwendabuko ngesikhathi sangempela noma ngokufunwa ngaphezulu kwe-inthanethi. Isikhathi Ngaphezulu Kusho ukuthi umhlinzeki wokuqukethwe uya ngaphezulu kwezinsizakalo ezijwayelekile ze-inthanethi njengokuphequlula iwebhu, i-imeyili, njll.
Ukusikwa kwentambo okuqale ngokuzimisela ngaphambi ubhadane luye lwashesha kakhulu ngokulinganiselwa Imizi eyizigidi ezingama-6.6 isika intambo ngonyaka odlule, okwenza cishe ingxenye eyodwa kwezine yemindeni yaseMelika ingabi nazintambo. Enye U-27% kulindeleke ukuthi wenze okufanayo e 2021.
Ngokusakazwa manje kubalwa cishe i-70% yokubukwa kwe-TV, lezi zilaleli ezinkulu zidonsa ukunakwa okuningi kubakhangisi. Ukuchitha imali ekukhangiseni kwe-OTT kulindeleke ukuthi kweqe kusuka ku- $ 990 wezigidi ngo-2020 kuya ku- $ 2.37 billion ngo-2025, inyonyoba kancane ibheke ekutholeni indawo ephezulu ye-TV yokuchitha.
Yize kunethuba elikhulu, ukusebenzisa ukukhangisa kwe-OTT kungaba yinselelo kuyo yonke imikhiqizo emikhulu nencane kanye nama-ejensi. Ngamapulatifomu amaningi, kunzima ukwazi ukuthi iyiphi okufanele uyikhethe. Ukuphatha ubudlelwano nabashicileli abaningi kunzima futhi kungaba nzima ukulandela amamethrikhi afanele ukwazi ukuthi yini okusebenzayo nokuthi yini okungasebenzi.
Ukuxazulula leyo nselelo, i-Flip, ingxenyekazi yokusebenza ye-OTT kusuka ku-Digital Remedy, inikeza indlela ehlakaniphile yokuthenga, ukuphatha nokwandisa imikhankaso ye-OTT. Kepha ngaphezu kwamanani wokuqedelwa kwamavidiyo, leplatifomu yokuwina imiklomelo yeDigiday inikezela ngemikhiqizo ngemininingwane eningiliziwe ngobuciko obenza kahle kakhulu, ama-geographies, abashicileli, ama-dayparts, nokuningi. Iletha ukunikezwa kwe-funnel egcwele, ukuphakanyiswa komkhiqizo, kanye nokuhlaziywa kokuphakanyiswa kokunyusa ukwazisa abakhangisi hhayi kuphela ukuthi yimiphi imikhankaso eshayela imiphumela (nokuthi kanjani), kepha ibeka le mininingwane ukuthi isebenze ngokushesha, ikhulise imikhankaso ngesikhathi sangempela ebheke eziguquguqukayo ezenza kahle kakhulu. Isixazululo senkonzo egcwele sisingatha wonke umkhankaso wokuphila wokukhangisa we-OTT, unika amandla izinhlobo nama-ejensi wabo bonke osayizi ukusebenzisa ithuba le-OTT ngokulula.
Umthombo ngokuqondile kusuka ku-Premium Inventory
Ngokusebenzisana okubanzi embonini, ama-brand kanye nama-ejensi athola ukufinyelela okuqondile kuwo wonke umshicileli we-premium OTT ukukhulisa ukufinyelela kwezithameli. Ipulatifomu leFlip lifaka imininingwane enothisiwe ukuze kuthuthukiswe ukwenziwa kwesikhathi sangempela, kuqinisekiswe ukuthi imikhankaso isebenza ngokusemandleni abo ngenkathi ihlinzeka ngemininingwane ejulile futhi isebenzisa kakhulu isabelomali somkhangisi. Ngoba akekho umuntu ophakathi nendawo, ama-brand athola amanani entengo asebenza kahle kakhulu, akha i-ROI ephezulu futhi abuyisele kusikhangiso (ROAS). Futhi ngoba lonke isu le-OTT liphethwe ngaphakathi kweFlip, asikho isidingo sokuhlupheka ngobudlelwano obuningi bomthengisi noma izinkontileka. Ilula, ihlanganisiwe, futhi isebenza kahle.
Linganisa Izenzo, Hhayi Ukubukwa Nje
Njengoba isilinganiso se-OTT siqhubeka nokuvuthwa, imikhiqizo ifuna ukubheka ngaphezu kwamazinga wokuqedelwa kwevidiyo (i-yebo / cha kanambambili), ukuchofoza, nokuvelayo. Ekupheleni kosuku, abakhangisi bafuna ukwazi ukuthi imikhankaso yabo iyishayela kanjani imiphumela elinganisekayo, futhi ekugcineni, nokuthengisa. UFlip uyakwazi ukuxhuma lawo machashazi, ukukala ama-KPI njengokulandwa kohlelo lokusebenza, ukuvakashelwa iwebhusayithi, izinqola zokuthenga eziqalisiwe, kanye nokuvakashelwa esitolo. Ipulatifomu ibopha ukubukwa nomphumela wangempela wokukhangisa, ukuze ukwazi ukubona ukuthi yini esebenzayo nokuthi yini engasebenzi.
Lesi ngesinye sezici ezisemqoka ezenza ukuthi isixazululo sethu sihluke impela — singahlanganisa umphumela wokukhangisa futhi sikwenze kuwo wonke amadivayisi, ukuze ubone ukuthi yini ehambisa inaliti ngempela. Lokho kusho ukuthi uthola ukuqonda kwangempela, okwenzekayo ukwenza ushintsho olunengqondo emikhankasweni yakho yokufeza izinhloso zebhizinisi lakho.
UMichael Seiman, oyi-Digital Remedy CEO
Idatha Ebanzi Yemininingwane Ejulile
Abakhangisi abaningi banokufinyelela kumininingwane yamakhasimende abo yokuqala futhi yilokho-akukho lutho ngamakhasimende ezincintisana nabo noma ngamakhasimende angaba khona. Nge-Flip, ungaletha idatha yakho bese uyihlanganisa nemithombo yedatha yenkampani yangaphandle ebanzi ye-Digital Remedy futhi usebenzise le datha ebanzi yokuqondisisa nokubika kwezithameli ezijulile. Lokho kusho ukuthi ungasebenzisa imali kumncintiswano wakho ukuze uthole imiphumela engcono.
Imiphumela yesikhathi sangempela yokuphakanyiswa komkhiqizo
Ngaphandle kokubukwa nje nokuguqulwa kwesisekelo esiphansi, iFlip ibuye ivumele abathengisi ukuthi balandele ukuphakanyiswa komkhiqizo ngokuhlanganisa amamethrikhi wokuzibandakanya we-OTT anemininingwane esekwe ocwaningweni ukukala ukuqwashisa, ukukhumbula nokubona. Ngakho-ke nakwalabo abangakaguquki okwamanje, i-Flip ikuvumela ukuthi uthathe ukushayisana komkhiqizo ukubona ukuthi izikhangiso zakho ziyahlangana yini nezithameli zakho ezihlosiwe.
Thola Ukuthi Yini Ehambisa Ngempela Inaliti
Ekukhangiseni kwedijithali, kunokuhlukahluka okuningi okungabangelwa impumelelo yomkhankaso. Iqiniso liwukuthi, izethameli, futhi kungenzeka kakhulu, zivezwe ezikhangisweni zakho kwezinye iziteshi zemidiya ngasikhathi sinye kulo lonke umkhankaso wakho we-OTT. Ngeke yini kube kuhle ukukhomba ukuthi yiziphi izingxenye zomkhankaso wakho empeleni ezishayela imiphumela? Nge-Flip, imikhiqizo ingawuphendula lo mbuzo: kuwo wonke umuntu othathe isenzo, bangaki kubo abenze kanjalo ngenxa yokuvezwa kwe-OTT ngokukhethekile? I-Flip inikela ngamamethrikhi wokukhuphula ajulile, ukukala nokukhomba ukuthi iziphi eziguquguqukayo zomkhankaso wakho ezinomthelela omubi kunayo yonke emgqeni wakho wendlela oyothenga. Inikela ngezinga lembudumbudu ngokuhlukanisa umphumela nokuthola inani le-OTT emkhankasweni wakho jikelele. Ngokuqhathanisa amazinga okuguqulwa kwamaqembu adaluliwe nalawulayo kuzo zonke izinto ezifana nobuciko, abashicileli, nezethameli, siyakwazi ukubona ukuthi kungenzeka kangakanani ukuthi umuntu aguquke lapho evezwa esikhangisweni sakho ku-OTT noma ngokuya ngokuhlukahluka okuthile komkhankaso.
Iminyaka Eyishumi Yobuchwepheshe Ohlangothini Lwakho
Umshini uhlakaniphile njengabantu abangemuva kwawo, futhi iqembu eDigital Remedy belisebenza kuvidiyo naku-OTT kusukela ngaphambi kokuthi ulandele noma yini. Ngeminyaka engaphezu kwengu-20 esikhaleni sedijithali, bebelokhu besebenzisa kuzo zonke izinhlobo zemidiya, kusukela emuva lapho kusadingeka ukuthi uzenzele ngesandla. Futhi cishe iminyaka emihlanu esikhaleni se-OTT uqobo, lolu lwazi lwesikhungo lusho ukuthi uthola ubuchwepheshe obusekelwa ngedatha obusekelwa ubuchwepheshe obujulile obuvela kochwepheshe abebekolunye uhlangothi njengabathengisi uqobo futhi benokuqonda okujulile kwamamethrikhi abakhangisi abawadingayo ngempela ukubona. Ukuhamba komsebenzi, ukubonwa, nokubika konke kwakhiwe ngokubuka kwamakhasimende ukuhlinzeka ngemininingwane oyidingayo ukuze uqonde ngokugcwele ukusebenza komkhankaso.
Ukugxumela entweni entsha efana ne-OTT kungabonakala kukhungathekisa, ikakhulukazi ngengcindezi eyengeziwe yokwazi ukuthi awunandlela yokuzikhethela — kulapho izethameli zakho nabancintisana nabo baya khona. Kepha ngamathuluzi nobuchwepheshe obufanele ekhoneni lakho, ngisho nemikhiqizo namafemu amancane kakhulu angancintisana nabafana abakhulu kulesi siteshi esisha esishisayo. Ngeplatifomu yokusebenza ye-Flip OTT, i-Digital Remedy iyenza ifinyeleleke, ibe lula, futhi ifinyeleleke kumikhiqizo nabakhangisi kuwo wonke amazinga wokuwina ku-OTT.
Hlela iDemo ye-Digital Remedy Flip
Tags: ukunamathelaikhambi ledijithaliflipottukuthenga isikhangisoUkuphathwa kwezikhangisoizikhangisoukukhangisa kwe-ottizibalo ze-ottUkuphathwa komkhankaso we-ottUkwenza umkhankaso we-ottimikhankaso ye-ottNgaphezulu